Luis Suárez oo si cad uga hadlay fikirkiisa ku aaddan imaatinka Neymar Jr iyo Lautaro Martínez ee kooxda Barcelona – Gool FM
(Spain) 08 Abril 2020. Weeraryahanka reer Uruguay iyo kooxda kubadda cagta Barcelona ee Luis Suárez ayaa soo dhaweeyay in Barca ay la soo saxiixato xiddigaha Neymar Jr iyo Lautaro Martínez.
Wargeysyada ka soo baxa gudaha Spain ayaa waxay shaaca ka qaadeen xilliyadii lasoo dhaafay in kooxda Barcelona ay xiiseeneyso inay dib u soo ceshato adeega xiddiga reer Brazil iyo naadiga PSG ee Neymar Jr, inta lagu gudi jiro suuqa kala iibsiga xagaaga ee soo socda.
Sidoo kale Barcedlona ayaa waxay indhaha ku heysaa da’ayarka reer Argantina iyo kooxda Inter Milan ee Lautaro Martínez, kana mid ah xiddigaha ay bar-tilmaameedka ka dhoiganeyso suuqa xagaaga ee soo socda.
Wargeyska “Mundo Deportivo” ee dalka Spain ayaa wuxuu shaaca ka qaaday wareysi uu bixiyay Luis Suárez, wuxuuna yiri:
“Martínez iyo Neymar oo kooxda Barcelona ah? way adag tahay in xilligan laga hadlo go’aanka ciyaartoyda, marka loo fiiriyo waxa ka dhacaya hareeraheena, waa xaalad adag”.
“Laakiin waxaan xaqiijin karaa inay yihiin ciyaartoy waa weyn, tusaale ahaan, Neymar Jr qof walba wuu garanayaa isaga, xaqiiqdii waan soo dhaweynayaa dib u soo laabashadiisa, wali wuxuu heystaa waxyaabo badan si uu ugu soo bandhigo kubadda cagta adduunka”.
“Lautaro Martínez wuxuu sameynayaa horumar, wuxuuna ku korayaa dalka Talyaaniga, waa lambarka sagaalaad ee leh dhaq-dhaqaaqyo cajiib ah oo kala duwan, wuxuuna ka tarjumayaa sida uu u yahay weeraryahan fiican.”